Nahazo Baiboly Amin’ny Fitenin-drazany Izy Ireo—Fiteny 115 Mahery
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Ourdou Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tatar Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Xhosa Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Mizara Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’izay te hamaky azy io ny Vavolombelon’i Jehovah.
Nanao pirinty Baiboly an’arivony tapitrisa sy tamin’ny fandikan-teny samihafa ny fikambanana maro mpampiely Baiboly. Maro be anefa ny olona tsy manana Baiboly amin’ny fiteniny, satria mahantra sy avakavahana noho ny fivavahany. Mizara ny Baiboly Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny fiteny 115 mahery àry ny Vavolombelon’i Jehovah.
Ireto misy ohatra mampiseho an’izany:
Rwanda: Hoy i Silvestre sy Venantie, mpivady manan-janaka efatra: “Tsy afaka nividy Baiboly ho an’ny mpianakavy tsirairay izahay satria mahantra be. Manana ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny fiteny kinyarwanda daholo anefa izahay izao, ary miara-mamaky azy io isan’andro.”
Hoy ny pasitera anglikanina iray any Rwanda: “Tsara lavitra noho ny Baiboly rehetra efa novakiko ity Baiboly ity, satria mazava amiko izay voalaza ao. Tena mitady izay hahasoa ny hafa mihitsy ny Vavolombelon’i Jehovah!”
Repoblika Demokratikan’i Congo: Tsy nety nivarotra Baiboly amin’ny fiteny lingala tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah ny fivavahana sasany. Io anefa no anisan’ny fiteny be mpampiasa indrindra ao amin’io firenena io.
Tsy mahagaga raha mazoto mampiasa sy mizara ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny fiteny lingala ny Vavolombelon’i Jehovah any, rehefa nivoaka io Baiboly io. Nampihetsi-po tokoa ny nivoahan’ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Na ny polisy tao amin’ny kianja iray nanaovan’ny Vavolombelon’i Jehovah fivoriambe aza mba nilahatra haka ny anjarany.
Fidji: Lafo be ny Baiboly amin’ny fiteny fidjianina, ka Vavolombelon’i Jehovah maro no nampiasa ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao anglisy, taloha. Nahazo Ny Soratra Grika Kristianina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (Testamenta Vaovao) amin’ny fitenin-drazany anefa ny Fidjianina tamin’ny 2009.
Niaiky ny lehilahy iray fa mazava be ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny fiteny fidjianina, ka nangataka anankiray izy. Nilaza taminy anefa ny Vavolombelona teo an-toerana fa tsy maintsy miandry izy satria afaka iray volana, fara fahaingany, vao hisy Baiboly tonga indray. Tsy nahandry izy ka naleony nandeha tany amin’ny 35 kilaometatra, mba hihaona amin’ny Vavolombelona hafa manana Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao homena azy. Hoy ilay lehilahy: “Tsara lavitra noho ilay efa fampiasanay hatramin’izay ity fandikan-teny ity. Mazava sady mora azo ilay izy.”
Malawi: Fantatry ny olona tao amin’ny fikambanan’ny Fiangonana Batista teo an-toerana fa nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah i Davide. Tonga tany an-tranony àry izy ireo naka ny Baiboly efa nomeny azy. Tanteraka anefa ny nofinofiny rehefa nivoaka tamin’ny fiteny chichewa ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao.
Efa nieritreritra i Davide hoe ahoana indray no hahazoany Baiboly iray hafa satria lafo be ny Baiboly any Malawi. Rehefa nomena Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao àry izy, dia nilaza toy izao: “Manana Baiboly tsara lavitra noho ilay taloha aho izao!”
Nivoaka tamin’ny fivoriamben’ny vondrom-paritra tany New York ny tapany voalohany amin’ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao anglisy, 60 taona mahery lasa izay. Nampirisihina ny mpanatrika tamin’izay mba hamaky sy hianatra an’ilay Baiboly ary hizara an’ilay izy amin’ny hafa. Notanterahin’ny Vavolombelon’i Jehovah tokoa izany ka 175 tapitrisa mahery ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao efa nataon’izy ireo pirinty. Afaka mamaky an’io Baiboly io ao amin’ny Internet, amin’ny fiteny 50 eo ho eo koa ianao.